446s Inweta onwe m setịpụrụ ezé ezé ọhụrụ (naanị n’ime awa atọ heh) laminate-Edward Avila images and subtitles
Fleeting Taa ~~~~ Akpụkpọ ụkwụ abụọ Ya na Leo Jay ~! ~ Onye obula Guys, onye ọ bụla ~ Abụ m Leo J. Mụta Bekee n’ụbọchị ndị a Ya mere uda di ka nke robot Ike gwụrụ m, ụra na -ehi ụra n'ihi ụra efu ugbu a. Anyị ugbu a Anọ m n’ụlọ ezumike awa atọ. 3 ikp Echere m na ọ dị mma maka ezé m ?? ; Ezé gị na-ahụ ezigbo mma ?? Ekwughị m nke ahụ na m kwuru na ọ bụghị ihe ọjọọ O kwuru na ọ gbagọrọ agbagọ na odo Kedukwa ihe ọzọ ikwuru? Ekwuru m na ọ dị ka nke a Ọ bụ eziokwu? Ekwuru m na ezughi oke n'etiti Ugbu a ọ bụ corona Yabụ, iji nwalee Ebumnuche bụ na ịnwere ike ịkwado n'ime awa atọ. Ọ dị ka ọ ga - ewe awa 3 ọzọ Ulo ogwu 3.5 Mana amaghim ma aga enwe nnukwu mgbanwe Anaghị m etinye lipstick pastel Ọ bụrụ n’itinye ihe a, ezé gị ga-acha odo odo karịa odo odo Haha * Maybelline lipstick * Hahaha Dị ka unere Ihu ihu Gosi m ezé gị N’etiti unu dịtụ ọcha Agba odo na njedebe Onwe Ihe dọkịta ahụ kwuru Ọ dị oke nkọ ebe a Na ahịrị Ọ jagged ma dị mma n'anya. Ya mere aga m ejide ya Na ọbụna agba nke ezé Nke mbu, echere m na m gha ata ikikere ezé m niile Mana lee, na nke m Ọ dị ka ntinye ntu na Dashing Diva. Mgbe ntakịrị ntakịrị na mpụga ezé Obere ntakịrị n’elu Kama itinye prosthesis (enweghị m ike icheta okpu) N’eziokwu, echere m na ezé ala bụ nsogbu kachasị Enwere m ike ịhụ ya mgbe m kwuru okwu Mana m kwesiri idozi ya? Ehee, o yighị ka ọ na-eweta balm Ihe ahụ na-edozi ezé kpuchie ya na mmanụ mmiri n'ime, ya mere ọ ga-anọrọ nke ọma :) (Nke ahụ) * Anesthesia gel + mgbe obere akụkụ izizi * Ọdịdị m: My ọnọdụ: Tupu nke a Nke a bụ mgbe emechara Egwu Ọ na-adị ka ịkpụcha ọkụ nke matte; Echere m na enwere m ike itinye ihe na ya Ọ dị ka ị na-eme prosthetics ugbu a Nyere m aka ruo mgbe ọ gwụchara ... nọrọ naanị ... Ọ kwesịrị ka m laa? Ma ọ laa Nwere onwe gị ime ihe ọ bụla ị na-eme awa atọ Nọdụ ala n'ọnụ ụlọ ogologo ma ọ bụ pụọ n'èzí ịzụta ma ọ bụ rie ihe Mana m Ọ ga-amasị m ihi ụra Ezigbo Im N’aka ozo, awa 3 agafebeghị 7 awa gara aga Alaghachighala m na enwe mmetuta ohuru !!! Ahụla m kristal dị ọcha ma doo anya ugbu a Nkata Gịnị bụ ihe dị iche? Ọ dị otu izu Ọ dị gị ka m ugbu a? Amụtara m ya Kama inwe mmetụta na ihe dị n’elu ezé gị Aga m anwale ụfọdụ ngwaahịa egbugbere ọnụ Nwere ike ịhụ ezé n’okpuru Na mgbe ị na-atụle ngwaahịa egbugbere ọnụ mbụ Adaghị m ọchị nke ukwuu. Likeka eyi ho asɛm Aga m ewere agba gbara agba tinye ihe dị omimi n’ebe ahụ Naanị otu iwu adịghị Ezigbo Dalia Blooming Edition Lip Paradise Sheer Dew Tinted Lipstick Agba Olivia K-mara mma na-achụ ọtụtụ ndị mmadụ Aha agba agba bụcha aha ụmụ nwanyị Ọ bụrụgodị na o kwuo ụdị ụcha ọ bụ, amaghị m ihe ọ na-abụ Ebe ị gara Olivia Brenda ma ọ bụ Shalọm Chei ... Bright Nke a bụ akara eji akpọ Hens Nke a bụ otu n'ime ụdị K-mma ọhụrụ Daysbọchị ndị a, ndị na-eto eto nwere mmasị na ya 'Nchọgharị dị nro' Nke a bụ enweghị ọrụ Ink dee owu na agba Atụmatụ na-acha odo odo agbazere Agba ndị ahụ niile yiri. N’ikpeazụ Ka anyị gaa ihe ọchị n’oge a. Ka anyi mee Sailor Ọnwa ~! Nchịkọta Sailor Moon X X Agba 'Usagi' Enweghị ọrịa cancer n'ime
Inweta onwe m setịpụrụ ezé ezé ọhụrụ (naanị n’ime awa atọ heh) laminate-Edward Avila
< start="0.98" dur="3.72"> Taa ~~~~ Akpụkpọ ụkwụ abụọ >
< start="5.12" dur="1.7"> Ya na Leo Jay ~! ~ >
< start="6.82" dur="1.4"> Onye obula >
< start="9.2" dur="1.96"> Guys, onye ọ bụla ~ Abụ m Leo J. >
< start="12.86" dur="1.94"> Mụta Bekee n’ụbọchị ndị a >
< start="14.8" dur="2.24"> Ya mere uda di ka nke robot >
< start="17.04" dur="4.5"> Ike gwụrụ m, ụra na -ehi ụra n'ihi ụra efu ugbu a. >
< start="21.54" dur="1.18"> Anyị ugbu a >
< start="23.14" dur="1.62"> Anọ m n’ụlọ ezumike awa atọ. >
< start="27.2" dur="0.76"> 3 ikp >
< start="28.36" dur="1.7"> Echere m na ọ dị mma maka ezé m ?? >
< start="38.56" dur="1.68"> Ezé gị na-ahụ ezigbo mma ?? >
< start="40.24" dur="2.18"> Ekwughị m nke ahụ na m kwuru na ọ bụghị ihe ọjọọ >
< start="42.42" dur="3.34"> O kwuru na ọ gbagọrọ agbagọ na odo >
< start="50.16" dur="2.1"> Kedukwa ihe ọzọ ikwuru? >
< start="53.32" dur="1.2"> Ekwuru m na ọ dị ka nke a >
< start="54.52" dur="0.5"> Ọ bụ eziokwu? >
< start="55.02" dur="1.46"> Ekwuru m na ezughi oke n'etiti >
< start="57.9" dur="0.9"> Ugbu a ọ bụ corona >
< start="58.8" dur="1.16"> Yabụ, iji nwalee >
< start="59.96" dur="4.72"> Ebumnuche bụ na ịnwere ike ịkwado n'ime awa atọ. >
< start="64.68" dur="1.96"> Ọ dị ka ọ ga - ewe awa 3 ọzọ >
< start="69.54" dur="1.86"> Ulo ogwu 3.5 >
< start="75.98" dur="3.42"> Mana amaghim ma aga enwe nnukwu mgbanwe >
< start="80.96" dur="1.98"> Anaghị m etinye lipstick pastel >
< start="85.38" dur="2.46"> Ọ bụrụ n’itinye ihe a, ezé gị ga-acha odo odo karịa odo odo >
< start="107.12" dur="2.34"> Hahaha Dị ka unere >
< start="109.46" dur="0.96"> Ihu ihu >
< start="114.96" dur="0.58"> Gosi m ezé gị >
< start="117.46" dur="3.28"> N’etiti unu dịtụ ọcha >
< start="120.74" dur="1.56"> Agba odo na njedebe >
< start="139.96" dur="1.32"> Onwe >
< start="147.86" dur="1.3"> Ihe dọkịta ahụ kwuru >
< start="151.24" dur="1.4"> Ọ dị oke nkọ ebe a >
< start="152.64" dur="1.94"> Na ahịrị >
< start="156.06" dur="2.6"> Ọ jagged ma dị mma n'anya. >
< start="158.66" dur="1.62"> Ya mere aga m ejide ya >
< start="160.28" dur="2.58"> Na ọbụna agba nke ezé >
< start="162.86" dur="6.38"> Nke mbu, echere m na m gha ata ikikere ezé m niile >
< start="169.24" dur="2.16"> Mana lee, na nke m >
< start="171.4" dur="4.32"> Ọ dị ka ntinye ntu na Dashing Diva. >
< start="175.72" dur="2.12"> Mgbe ntakịrị ntakịrị na mpụga ezé >
< start="177.84" dur="1.82"> Obere ntakịrị n’elu >
< start="179.66" dur="1.7"> Kama itinye prosthesis (enweghị m ike icheta okpu) >
< start="181.36" dur="3.5"> N’eziokwu, echere m na ezé ala bụ nsogbu kachasị >
< start="184.86" dur="2.06"> Enwere m ike ịhụ ya mgbe m kwuru okwu >
< start="186.92" dur="2.88"> Mana m kwesiri idozi ya? >
< start="189.8" dur="1.72"> Ehee, o yighị ka ọ na-eweta balm >
< start="194.98" dur="2.6"> Ihe ahụ na-edozi ezé kpuchie ya na mmanụ mmiri n'ime, ya mere ọ ga-anọrọ nke ọma :) >
< start="197.58" dur="0.84"> (Nke ahụ) >
< start="204.7" dur="2.84"> * Anesthesia gel + mgbe obere akụkụ izizi * >
< start="207.54" dur="1.6"> Ọdịdị m: >
< start="209.14" dur="1.64"> My ọnọdụ: >
< start="210.78" dur="1.64"> Tupu nke a >
< start="212.86" dur="1.12"> Nke a bụ mgbe emechara >
< start="214.76" dur="0.88"> Egwu >
< start="215.64" dur="1.74"> Ọ na-adị ka ịkpụcha ọkụ nke matte; >
< start="217.38" dur="2.06"> Echere m na enwere m ike itinye ihe na ya >
< start="220.02" dur="1.94"> Ọ dị ka ị na-eme prosthetics ugbu a >
< start="222.52" dur="2.72"> Nyere m aka ruo mgbe ọ gwụchara ... nọrọ naanị ... >
< start="225.24" dur="0.94"> Ọ kwesịrị ka m laa? >
< start="226.18" dur="2.06"> Ma ọ laa >
< start="228.24" dur="2.88"> Nwere onwe gị ime ihe ọ bụla ị na-eme awa atọ >
< start="231.12" dur="3.68"> Nọdụ ala n'ọnụ ụlọ ogologo ma ọ bụ pụọ n'èzí ịzụta ma ọ bụ rie ihe >
< start="234.8" dur="2.64"> Mana m >
< start="237.44" dur="2.06"> Ọ ga-amasị m ihi ụra >
< start="239.5" dur="0.94"> Ezigbo Im >
< start="250.58" dur="2.32"> N’aka ozo, awa 3 agafebeghị >
< start="252.9" dur="1.98"> 7 awa gara aga >
< start="254.88" dur="3.12"> Alaghachighala m na enwe mmetuta ohuru !!! >
< start="275.68" dur="2.3"> Ahụla m kristal dị ọcha ma doo anya ugbu a >
< start="299.76" dur="0.62"> Nkata >
< start="310.02" dur="1.84"> Gịnị bụ ihe dị iche? >
< start="312.66" dur="1.12"> Ọ dị otu izu >
< start="313.78" dur="2.14"> Ọ dị gị ka m ugbu a? Amụtara m ya >
< start="315.92" dur="2.52"> Kama inwe mmetụta na ihe dị n’elu ezé gị >
< start="318.44" dur="2.06"> Aga m anwale ụfọdụ ngwaahịa egbugbere ọnụ >
< start="320.5" dur="2.4"> Nwere ike ịhụ ezé n’okpuru >
< start="322.9" dur="2.64"> Na mgbe ị na-atụle ngwaahịa egbugbere ọnụ mbụ >
< start="325.54" dur="2.44"> Adaghị m ọchị nke ukwuu. >
< start="327.98" dur="1.04"> Likeka eyi ho asɛm >
< start="331.58" dur="3.18"> Aga m ewere agba gbara agba tinye ihe dị omimi n’ebe ahụ >
< start="334.76" dur="1.16"> Naanị otu iwu adịghị >
< start="335.92" dur="4.08"> Ezigbo Dalia Blooming Edition Lip Paradise Sheer Dew Tinted Lipstick >
< start="340.6" dur="0.8"> Agba Olivia >
< start="341.4" dur="2.66"> K-mara mma na-achụ ọtụtụ ndị mmadụ >
< start="344.06" dur="3.66"> Aha agba agba bụcha aha ụmụ nwanyị >
< start="347.72" dur="2.64"> Ọ bụrụgodị na o kwuo ụdị ụcha ọ bụ, amaghị m ihe ọ na-abụ >
< start="350.36" dur="0.68"> Ebe ị gara >
< start="351.66" dur="0.96"> Brenda ma ọ bụ >
< start="352.62" dur="1"> Shalọm >
< start="357.8" dur="1.6"> Chei ... >
< start="372.2" dur="1.66"> Nke a bụ akara eji akpọ Hens >
< start="373.86" dur="2.18"> Nke a bụ otu n'ime ụdị K-mma ọhụrụ >
< start="376.04" dur="2.9"> Daysbọchị ndị a, ndị na-eto eto nwere mmasị na ya >
< start="378.94" dur="2.76"> 'Nchọgharị dị nro' >
< start="395.2" dur="1.52"> Nke a bụ enweghị ọrụ >
< start="396.72" dur="2.56"> Ink dee owu na agba >
< start="399.28" dur="2.34"> Atụmatụ na-acha odo odo agbazere >
< start="406.14" dur="1.92"> Agba ndị ahụ niile yiri. >
< start="420.9" dur="0.76"> N’ikpeazụ >
< start="421.66" dur="1.32"> Ka anyị gaa ihe ọchị n’oge a. >
< start="422.98" dur="1.22"> Ka anyi mee Sailor Ọnwa ~! >
< start="424.2" dur="2.54"> Nchịkọta Sailor Moon X X >
< start="427.44" dur="0.88"> Agba 'Usagi' >
< start="444.02" dur="1.92"> Enweghị ọrịa cancer n'ime >